Thwebula YouTube 15.13.33 isizulu – Vessoft
Isistimu esebenzayo: Android
Ikhasi elisemthethweni: YouTube
YouTube – a software ukubuka ividiyo enkonzweni popular YouTube. Isofthiwe ikuvumela ukuba ubhalisele iziteshi ezahlukene, buka ukusakazwa online, engeza, ahlaziye kanye ukuphawula video. YouTube kwenza ukucinga video ngegama noma izigaba athandwayo. Isofthiwe ikuvumela ukubuka ividiyo in HD nge support for engezansi. YouTube kwenza ukuba alawule ubukhulu window of the video, eyenza elula ukusebenza kanye nezinye izici isofthiwe ngesikhathi ebuka. Isofthiwe futhi ikuvumela ukuba wabelane isixhumanisi video ngokusebenzisa ezinye izinhlelo zokusebenza umsebenzisi.
Kwehlwaya ukhululekile of video
Ukusekela of HD kanye izihlokwana
Nelikhono lekuhlola futhi kuphawulwe video
Elawula ubukhulu window of the video
Thepha inkinobho eluhlaza ukuze uqale ukulanda
Faka nge-Google Play
Amazwana ku YouTube
YouTube software ehlobene
I-Google Drayivu – isitoreji samafu esidumile sokushintshanisa futhi sisebenze ngamafayela ezinhlobo ezahlukahlukene. Futhi, isoftware ivumela ukunikeza ukufinyelela kwamanye amafayela kwabanye abasebenzisi bokuhlela ngokuhlanganyela.
A isofthiwe for the free zokuxhumana ngezwi kanye exchange of imiyalezo phakathi abasebenzisi. Futhi isofthiwe kwenza ukuba abize mobile phones kanye yasendlini ngesikhathi nemali lekhokhwako evumayo.
I-DropBox – ithuluzi lokusebenza ngokulondolozwa kwamafu. Uhlelo lukuvumela ukuthi ugcine amafayela ahlukahlukene kwisitoreji samafu futhi unikeze ukufinyelela okujwayelekile kumafayili alandiwe.
Isiphequluli odumile ngejubane eliphezulu kwekhasi loading. Futhi isofthiwe encrypts traffic ukuvikela ngokumelene namathonya yangaphandle.
Ama-Hangouts – isithunywa esidumile sokukhulumisana ngombhalo, ngezwi nangevidiyo. Futhi, isoftware ixhumana nezinhlelo zokusebenza eziningi ezivela kwensizakalo ye-Google eyaziwayo.
Isofthiwe ukusakaza ividiyo ukusakaza inethiwekhi kusuka kudivayisi yakho ikhamera noma upheqa nezinye ukusakazwa emhlabeni jikelele.
I-Clean Master – imenenja ethandwayo yokulawulwa kwefayela nokwenza kahle uhlelo. Isoftware ivumela ukuhlaziya isimo sedivayisi futhi ihlanze uhlelo lomsebenzi okhiqizayo.
I-Duolingo – ithuluzi lokufunda ntofontofo kwezilimi zasemazweni angaphandle kanye nokuthuthukiswa kwamakhono okukhuluma. Isoftware ikuvumela ukuthi ufunde inani elikhulu lezilimi futhi ifaka izindlela zokufunda ezahlukahlukene.
Isofthiwe for elawulwa kude computer esebenzisa smartphone. Isofthiwe uyakwazi belingisa ngokugcwele imisebenzi igundane kanye ikhibhodi.